Nhau - Ungasarudza sei gokora gumbo uye chii chiri basa uye maficha egokora brace?
Kutanga, ngatitaurei nezve izvo zvakagadziriswa brace
Bhande (brace) rudzi rwechikwambo chakaiswa kunze kwemuviri kudzora kumwe kufamba kwemuviri, nokudaro zvichibatsira mhedzisiro yekurapa kwekuvhiya, kana kushandiswa chaiko kugadzirisa kwekunze kwekurapa kusiri kwekuvhiya. Panguva imwecheteyo, kuwedzera kumanikidza pfungwa pahwaro hwekugadziriswa kwekunze kunogona kuve yekumisikidza kurapa kwekugadzirisa kwekuremara kwemuviri.
Iko kushanda kwesimbi
Semuenzaniso, iro bira rinopisa mushure meporiyo, mhasuru dzinodzora kuwedzera uye kubhururuka kwemabvi akabatanidzwa zvese zvakaremara, mabvi akabatanidzwa akapfava uye haana kugadzikana, uye kuwedzeredza kwakanyanya kunodzivirira kumira. Iyo brace inogona kushandiswa kudzora ibvi rakabatana munzvimbo yakajairwa yakatwasuka kuti ifambise kurema-kutakura. Mune varwere vane paraplegia yemakumbo epazasi, mabvi akabatanidzwa haakwanise kugadzikana munzvimbo yakatwasuka kana wakamira, uye zviri nyore kukotamira kumberi uye kupfugama pasi. Iko kushandiswa kwesimbi kunogona kudzivirira kubatana kwemabvi kubva mukuchinja. Mumwe muenzaniso ndewekuti kana tsandanyama dzemumakumbo dzikamomara chose, gumbo rakapfava uye rakapenya. Iwe unogona zvakare kupfeka chibooreso chakabatanidzwa neshangu kudzikamisa ankle uye kufambisa kumira nekufamba.
RotChengetedza mapfupa emabhonzo kana kutsemuka pane kurema-kurema
Semuenzaniso, mushure mechidzitiro chevakadzi kana tibial shaft ine chikamu chakakura chekuremara kwepfupa kwemahara mapfupa kubatanidzwa, kuitira kuti uve nechokwadi chekupona kwakazara kwebhonzo uye kudzivirira kutsemuka kwepfupa kusaitika uremu husati hwatakurwa, gumbo repazasi chibooreso chinogona kushandiswa kuchidzivirira. Iyi brace inogona kutakura huremu pasi. Giravhiti inopfuudzwa kune iyo ischial tuberosity kuburikidza neiyo brace, nokudaro ichideredza huremu hwechikadzi kana tibia. Mumwe muenzaniso kukuvara kwetsoka. Kutsemuka kusati kwaporeswa zvakakwana, inogona kudzivirirwa nechisungo.
OrRuramisa urema kana kudzivirira kuwedzera kwaro
Semuenzaniso, varwere vane hunyoro scoliosis pazasi pe40 ° vanogona kupfeka brace vest kugadzirisa scoliosis uye kudzivirira kuwedzera kwayo. Kune yakapfava hudyu kubviswa kana kudzvinyirira, chiuno chekutora chibooreso chinogona kushandiswa kudzikisira dislocation. Kudonhedza tsoka, unogona kushandisa bracket rakabatana neshangu kudzivirira tsoka kudonha zvichingodaro. Kuti ubvise musoro uye tsoka dzakatsetseka, kuwedzera insoles irwo rudzi rwekusunga.
Semuenzaniso, kana mhasuru dzemaoko dzikapwanyika uye dzisingakwanise kubata zvinhu, shandisa chibooreso kuti ubate ruwoko munzvimbo inoshandira (dorsiflexion position), uye nekuisa kusimudzira kwemagetsi paruoko rwechikwambo kusimudzira kudzvinyirira kwemhasuru dze flexor uye dzorera kubata kwacho. Mamwe mabhureki ari nyore muchimiro. Semuenzaniso, kana chigunwe chikashaikwa, hoko kana clip yakamisikidzwa pabremberi brace inogona kushandiswa kubata kapuni kana banga.
SsAssist ruoko rwekuita zviitwa
Rudzi urwu rwechikwambo runowanzoshandiswa. Semuenzaniso, kudzidzira kutenderera kwema metacarpophalangeal majoini uye interphalangeal majoini, chibooreso chinobata ruoko rwechiuno munzvimbo yekumisikidza yekuwedzera, uye yakasungirirwa brace iyo inochengetedza iko kutenderera kweminwe yekudzidzira kutwasuka kweminwe.
⑥ Gadzira urefu
Semuenzaniso, kana murwere ane chidimbu chepfupi chepasi akamira uye achifamba, chiuno chinofanira kusendamiswa, uye kurereka kwechiuno kunokonzeresa kukombama kweiyo lumbar musana, iyo inogona kukonzeresa kurwadziwa kwepashure nekufamba kwenguva. Kugadzirira kureba kwemitezo mipfupi, tsoka dzinogona kukwidziridzwa. .
⑦ Yenguva pfupi yekunze fixation
Semuenzaniso, mutsipa wedenderedzwa unofanirwa kupfekwa mushure mekuvhiyiwa kwechibereko chechibereki, chiuno chechiuno kana vesti inofanirwa kupfekwa mushure mekuvhiyiwa kwe lumbar fusion.
Nekukurumbira kwemushonga wekuvandudza uye kuenderera kuri kuuya kweyepasi-tembiricha uye yakanyanya-tembiricha thermoplastic machira uye zvinhu zveresin, mabhureki akasiyana siyana anoshandisa biomechanical dhizaini dzidziso dziri kuramba dzichikurudzirwa. Nezvakanaka zvavo zvekushanda kuri nyore uye mapurasitiki akasimba, ivo vanogona kutsiva gypsum uye kushandiswa zvakanyanya mukiriniki tsika. . Zvinoenderana nezvikamu zvakasiyana zvekushandisa, brace inogona kuganhurwa muzvikamu zvisere: musana, bendekete, gokora, ruoko, hudyu, ibvi, uye gumbo. Pakati pawo, mabvi, bendekete, gokora, uye mabhureki emakumbo ndiwo anonyanya kushandiswa. Mazuva ano ekugadzirisa brace anokwanisa kuzadzikisa zvakakwana zvinodiwa zvakasiyana zve postoperative immobilization, kugadziridza, kugadzirisa kushanda, kutonga kwekubatana exudation, uye proprioception kupora. Anowanzo shandiswa epafudzi mabhureki anosanganisira: wepasi rose akabatana mapfudzi ekubvuta mabhureki uye mapendekete mabhureki; elbow brace dzakakamurwa kuita zvine simba elbow brace, static elbow brace uye elbow brace. Ankle brace yakavakirwa pane avo Basa racho rakakamurwa kuita rakagadziriswa, rehabilitation kufamba chinzvimbo uye ankle mubatanidzwa mudziviriri. Kubva kwekutanga postoperative braking, yekubatana basa kupora, kudzora ankle inversion uye valgus panguva yekurovedza muviri, inogona kutamba chinzvimbo chakanaka pakurapa uye kugadzirisa.
Kana isu tasarudza kugokora mubatanidzwa wekusimbisa chibooreso, tinofanirwa kusarudza zvinoenderana nemamiriro edu ezvinhu. Edza kusarudza iyo ine yakagadziriswa kureba uye chuck, izvo zvinonyanya kubatsira kudzidziswa kwedu kwekuvandudza.